Iyini i-Hype Behind Virgin Hair (Izinjongo Zezinwele)? – SL Raw Virgin Hair LLC.
Iyini i-Hype Behind Virgin Hair (Izinjongo Zezinwele)?
Okthoba 19, 2020
Wonke umuntu wesifazane ulwela ukuba nobuhle obukhulu uma kuziwa ekubukekeni kwezinwele zabo. Izinwele ezinde, eziwugqinsi, ezinempilo, nezicwebezelayo zingeminye yemigomo yezinwele sonke esifisa ukuyifinyelela. Imikhiqizo eminingi yokunakekelwa kwezinwele nemigqa ekhethekile yakhelwe lokho nje - ukusiza abesifazane bagcine futhi bathole ukubukeka okuhle kwezinwele zabo.
Kodwa-ke, kwesinye isikhathi lezi zinto zivele zingasebenzi. Ufuzo, amahomoni, kanye nempilo yonke yomzimba kungaba nomthelela ekubukekeni kwezinwele. Yingakho imboni yezinwele ithole izixazululo eziningi ezahlukene ekubhekaneni nezinkinga ezihlukahlukene zezinwele. Kusukela ekwandisweni kwezinwele kuya ezinhlobonhlobo zokwelashwa kwe-botox yezinwele, kukhona yonke into yawo wonke umuntu okhona emakethe, kuya ngesabelomali sakhe.
Amathrendi akamuva embonini yezinwele, kanjalo nasemnyangweni wobuhle, anomthelela omkhulu ekuthuthukiseni ukubukeka kwemvelo. Lokhu kusho ukuthi nakuba ungeke uphiwe imivimbo noma izinwele ngendlela othanda ngayo, izixazululo zokwenziwa zamukelekile kodwa umphumela wokugcina kufanele ubukeke ngokwendalo. Okufanayo kuya ngezinwele - uma zibukeka njengezemvelo yakho, akekho ozobona ukuthi unazo yini izandiso, iwigi yangaphambili yeleyisi, njll.
Enye yezinketho ezethula izinwele ezibukeka ngokwemvelo kakhulu izinwele ezimsulwa. Ngakho-ke, yini impikiswano ngakho, futhi kungani wonke umuntu efuna izinwele ezimsulwa?
Ziyini izinwele ezimsulwa?
Ngezindlela ezilula, igama elithi “izinwele ezimsulwa” lisho “izinwele ezimsulwa”. Izinwele ezimsulwa ziyizinwele ezihlanzekile, ezingenawo amakhemikhali, ezingakaze zibe ngaphansi kokwelashwa kwezinwele ezinjengokudaya, ukuxubha, ama-perms, njll. Ngokuyisisekelo, ziyizinwele ezisesimweni sazo semvelo, ezingathonywa yinoma yini okungenzeka ukuthi iguqule ikhwalithi yayo kanye isimo. Embonini yezinwele, ibhekwa njengeyona enekhwalithi ephezulu kakhulu. Ngenxa yekhwalithi yazo kanye nendlela ephelele yokuhlangana nezinye izinwele, izinwele ezimsulwa zifunwa kakhulu emhlabeni wonke futhi lesi sidingo sibeka ngokuzenzakalelayo inani eliphezulu kuzo.
Yini eyenza izinwele ezimsulwa zibe ngcono?
Izinwele, esimweni sazo esimsulwa, ziqinile futhi zinempilo. Izinwele ezimsulwa ziphuma ezinweleni ezingakaze zifakwe ngaphansi kokwelashwa okubandakanya amakhemikhali futhi okungase kuzilimaze. Ngalokhu, izandiso zezinwele ezimsulwa ziba isikhathi eside futhi ziqinile. Enye into enhle eyenza kube kuhle ukuthi kungenzeka ukwenza isitayela izandiso zezinwele ezimsulwa nganoma iyiphi indlela futhi uzifake umbala futhi. Lokhu, nokho, akunakwenzeka ngezinwele zokwenziwa nezingezona izintombi.
Ukungaqondi kahle okujwayelekile: izinwele ezimsulwa noRemy
Kunombono oyiphutha ojwayelekile uma kukhulunywa ngezinwele ezimsulwa kanye ne-Remy. Njengoba kushiwo ngenhla, izinwele ezimsulwa azilashwa futhi izinwele zemvelo ezingasetshenziselwa izandiso zezinwele ezimsulwa. Izinwele ze-Remy izinwele lapho wonke ama-cuticles azo aphelele, ahamba ngendlela efanayo, futhi awalashwa. Ama-cuticles ohlangothini olulodwa ayinto engenakuqhathaniswa ngokubukeka kwemvelo. Yingakho inhlanganisela yezinwele ze-Virgin Remy iyona engcono kakhulu.
Ngakho-ke, uma ucabanga ukwenza okuthile okuhlukile ngezinwele zakho, wandise ubude bazo noma wengeze ivolumu ethile, inketho engcono kakhulu ukuya ku-Virgin Hair extensions bese usishiyela okunye - SL Izinwele Eziluhlaza . Ochwepheshe bethu bazokuhola kuyo yonke inqubo futhi baphakamise indlela engcono kakhulu yokugcina ikhwalithi yezinwele zakho ezimsulwa ezingeni eliphakeme kakhulu. Faka imali ezinweleni zakho futhi ubukeke futhi uthole izinwele obukade uzifuna – ezinde, eziwugqinsi, futhi ezinempilo.
Ibhalwe ngu-Maja Krdzic
Tags: Beautifu Hair, Beauty blogger, beauty trends, hair extensions, Hair talk, indian hair, raw virgin hair, Real Hair, trending, weave, weave lovers